လှသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အမရေ...။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မွေးနေ့ဟာ ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ပျော်ရွင်ပါစေ။
အဲဒီ့ကြယ်က မေ၂ ကိုစီးပြီး
ဘ၀စနေပြီဖြစ်တဲ့ အမ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များတွင် အဗာတာလေးပေါင်းများစွာနှင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ :D
အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ ...
သိချင်တာလေးက ဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်တာလဲ အစ်မ ...:P
Happy Birthday to you Pandora...
လူဆန်ဆန် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
may you be free from any physical and mental diseases from this very birthday.
HAPPY BIRTHDAY!!!!!!! sister
မမ Happy Birthday !!!
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ရက်မြတ်ပါ ...
သူတည်းတယောက်၊ ဟားဖို့ရောက်မူ၊ သူတယောက်မှာ၊ ပေါက်လင့်ကာသာဓမ္မတာတည်း....
ဆိုတဲ့အတိုင်း သမိန်ပန်သွပ်တယောက် ဟာသစွက်တဲ့ ခပ်မြူးမြူးပို့စ်ကလေးတွေကို ဆထက်တံပိုး တိုး၍ ရေးဖြစ်ပါစေသတည်းဟု ဆုတောင်း၊တိုက်တွန်းလိုက်ပါကြောင်း။
ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ မမ...
မမအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ နေ့လေးတစ်ရက်လဲဖြစ်ပါစေ...
ပျော်စရာ မွေးနေ့ မှသည်...
စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာ...
ရှေ့အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေလဲ ပြည့်စုံ အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
Happy Birthday အစ်မ
Happy Birthday ပန်ပန်
ပျော်ရွှင်မှုများနဲ့ မပြတ်တဲ့ ရေပွက်ပေါင်းများစွာ ချစ်ခင်သူများနဲ့အတူ ကူးခတ် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ညီမလေး ပန်ရေ..
Happy Birthday ဒေါ်လေး မတွေ့တာ မမြင်တာကြာပေါ့ဗျား)
ဒီနေ့ဘလော့ဂါ ကိုရုပ်ဆိုးရဲ့ သားလေး မွေးနဲ့ တူတူပဲ
သမုဒ္ဒရာထက် မှာ ကြာကြာတက်နေမဲ့..ရေပွက်ကလေး ဖြစ်ပါစေ..ပန်ပန်.. ( ဒီမှာလည်း ဆုထပ်တောင်းသွားတယ်)
တို့ အလှည့်မှာတော့..ပုံတူ လက်ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးကွယ်..း(
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းနိုင်ပါစေ မကြီးပန် ။
ကျနော်မွေးနေ့မှာလဲ ထေရ၀ါဒအထွန်းကားဆုံး သာသနာတော်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိမ်းသိမ်းကျင့်ကြံခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက သံဃာတော်တွေကို သွေးမြေကျအောင် ရက်စက်ခဲ့တဲ့နေ့ကြီးဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲဗျာ.ဆိုးသွမ်းမှုတွေ စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာတွေအတွက် ကျနော်တို့ပိုလုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ရမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်.မပန်ရေ..ဟက်ပီးဘတ်ဒေး တရာကျော်ပါစေဗျာ သားတရာ.မြေးတထောင်နဲ့ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်အမြဲနေနိုင်ပါစေဗျား...
စာတွေ အများကြီး ဆထက် တံပိုးတိုး၍ ရေးနိုင်ပါစေ ပန်ဒိုရာစံ၊ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
တရက်ကြီးများတောင် နောက်ကျသွားတာ တောင်းပန်လိုက်တယ်နော်။
ဖြစ်ခဲ့ ရခဲ့တာတွေကို ၀မ်းမြောက်ရင်း၊ မဖြစ်သေး မရသေးတာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင် သွေးသစ်လောင်းတဲ့ နေ့တနေ့ ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မွေးနေ့အမီ လာဖို့ပဲ။ ကျန်းမာရေးက ချူချာသလောက် အလုပ်က အားကောင်းမောင်းသန်ရှုပ်နေလို့ နောက်ကျသွားတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ..ဆက်လက် လူသားပီသနိုင်ပါစေလို့ပဲ..ဆုတောင်းပါတယ်။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းသူတွေ အများကြီးပါလား။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အသက်မေးသူကိုတော့ ကျေးဇူးနည်းနည်းပဲတင်ပါတယ်။း)
ပျော်ရွှင်စရာ စာတွေ ရေးနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါဦးမယ်။